တောင်သမန်သားလေး: November 2015
Posted by lin linn at 3:30 AM
Huawei Mate S ဖုန်း Android 5.1 Lollipop ကို Root လုပ်နည်း ကွန်ပျူတာမလို
Huawei Mate S ဖုန်း Android 5.1 Lollipop ဗားရှင်းကို Root လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်
ကွန်ပျူတာမလိုပါပဘူးခင်ဗျား ဒီဖုန်းကို SuperSu apk ဖြင့် ဖုန်းမှာတင် Root လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Click Here to Download SuperSU file
Click Here to Down SuperSU file
၁။ ဒေါင်းလော့ရလာတဲ့ SuperSu zip ဖိုင်ကို SD ကဒ်သို့ကူးထည့်ပါ။
၂။ ဖုန်းကို Custom recovery mode သို့ဝင်ပါ Volume Up + Power button
၃။ "Install" >SD Card>SuperSu file ကိုတစ်ဆင့်ချင်းသွားပြီးရွေးပေးလိုက်ပါ။
၄။ Backu Key ကိုနှိပ်ပြီး “reboot system” ကိုနှိပ် Rooting process တစ်ခု
ပြုလုပ်နေတုန်းခနစောင့်နေလိုက်ပါ ဖုန်းကို Reboot ချပေးလိုက်ပါ။
၅။ ပါဝါပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ SuperSu လေးရောက်နေပါလိမ့်မယ်
Root Access ရရှိနေပါပြီ။
နည်းပညာကို လက်ဝါးပေါ်မှာ ကိုယ်လိုသလို အသုံးပြုနိုင်စေမယ့် Augmented Reality
Author: Aung Kham November 30, 2015
Augmented Reality လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာဟာ အနာဂတ်မှာ ကမ္ဘာကို ကြီးစိုးမယ့် နည်းပညာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူဟာ ကင်မရာ တစ်လုံး သို့မဟုတ်၊ မျက်မှန် တစ်လက် သို့မဟုတ်၊ မျက်ကပ်မှန် တစ်ခု ရှိရုံနဲ့ မိမိ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာ မြင်တွေ့ရသလိုပဲ လက်ဖဝါးကိုလည်း စမတ်ဖုန်း အဖြစ် အသုံးပြုလို့ ရစေမှာပါ။ ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတာကတော့ အမေရိကန် MIT မှာ အိန္ဒိယ လူမျိုး အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား တစ်ဦးမှ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ SixthSense နည်းပညာ ဖြစ်ပြီး ရင်ဘတ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ ပရိုဂျက်တာ လည်စွဲ အသေးလေးနဲ့ လက်ဝါးပေါ်မှာ စမတ်ဖုန်း အကွက်ကို မြင်စေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်စေရုံ သက်သက်သာ မဟုတ်ပဲ ခလုပ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းခေါ်လို့ရပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းကို အိပ်ကပ်ထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ သူသွားမယ့် နောက်တစ်ဆင့် ကတော့ စမတ်ဖုန်း မပါတော့ပဲ SixthSense ကွန်ပျူတာ box သေးသေးလေးကပဲ ဖုန်းပြောခြင်း၊ အင်တာနက် သုံးခြင်းနဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးကို လုပ်ဆောင်စေမယ် စနစ်တစ်ခု အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
Virtual Reality ဆိုတာ ကွန်ပျူတာထဲက ပုံရိပ်ကို အပြင်လောက သယ်ဆောင်ခြင်း၊ အပြင်လောက ပုံရိပ်ကို ကွန်ပျူတာထဲ ထည့်သွင်းပြသခြင်း အဆင့်သာ ရှိသေးပြီး AR ကတော့ မိမိရဲ့ ခြေ၊ လက်၊ မျက်မှန်များနဲ့ ထိတွေ့ လုပ်ဆောင်တဲ့ အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft, Google, Samsung အပြင် အခြားသော ကုမ္ဗဏီများစွာဟာလည်း VR ဈေးကွက်ကို ဝင်လာပြီး အနာဂတ်မှာ စမတ်ဖုန်းတွေအစား လက်သည်းလောက်ပဲ ရှိမယ့် နည်းပညာ ပစ္စည်များကသာ ကြီးစိုးလာတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြ ပါတယ်။
Ref: wiki, MIT
Posted by lin linn at 3:27 AM
ဖုန်းကို လျှိ့ဝှက်ကင်မရာ (CCTV) လေးနဲ့ချိတ်ပြီးတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ -tinyCam Monitor PRO v6.3 Apk
ဖုန်းကို လျှိ့ဝှက်ကင်မရာ (CCTV) လေးနဲ့ချိတ်ပြီးတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ -tinyCam Monitor PRO v6.3 Apk ကောင်းလေးပါဗျာ ဘော်ဒါတွေ အသူ့းဝင်မယ့် Apk ကောင်းလေးပါဗျာ ဗားရှင်းအသစ်လေး ထပ်ထွက် လာလို့အသုံးလိုတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
tinyCam Monitor PRO v6.3 Apk | 12 MB | Resumable Links | Requires Android:1.6 and up |
Pink Messenger Apk (Messenger2ခုအသုံးပြုချင်သူများအတွက်)
Pink Messenger Apk လန်းလန်းလေး………
ဒီတခါတော့ Facebook ချစ်သူများအတွက် Facebook Messenger Apk ကို ၂ ခုတပြိုင်နက်တည်း သုံးချင်သူများအတွက် Pink Messenger V1.5.1 Apk…လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Comment လေးက အားဆေးပါနော်……
Apk Download Link………
Cream & Sugar Pro v2.2 For iPhone,iPad,iPod touch
iPhone/ iPad ကိုင်ဆောင်ကာ Cream & Sugar Pro v2.2 အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Update တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကို နောက်ခံ Background များပြောင်းခြင်း ၊ Color Effect များထည့်ခြင်း ၊ အသင့်ပါဝင်ပြီး သား Frame များထည့်ခြင်း ၊ အပြင်အခြားသော Feature ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြု လို့ကောင်းတဲ့ Photo Editor Pro လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးထားပြီးသား ပုံတွေကိုလည်း အရည်သွေး မှီတဲ့ ရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ File size: 80.2 MB ရှိပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ မိတ်ဆွေ များ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ နိုင်ပါပြီ။
ZTE V831W ဖုန်းကို Root လုပ်နည်း ကွန်ပျူတာမလို
ZTE V831W ဖုန်းကို Root လုပ်ချင်တဲ့ညီအကိုများအတွက်
ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Root လုပ်နည်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာမလိုဘူးဆိုရင်တော့ Kingroot apk ကြီးကို
မျက်လုံးထဲမြင်စေချယ်ပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ် ဒီဖုန်းအတွက်
Kingroot apk နောက်ဆုံးထွက်လေးနဲ့ Root ပေါက်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် Apk ကိုသာ
Download Here KingRoot APK V4.5
Download Here KingRoot APK V4.1
Backlight.pdf စက်နိုးနေသော်လည်း ရုပ်မပေါ်ဖြေရှင်းနည်း ( pdf မြန်မာစာအုပ် )
Android Phone Service ညီကိုတော်များအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့
Backlight.pdf / စက်နိုးနေသော်လည်း ရုပ်မပေါ်ဖြေရှင်းနည်း မြန်မာစာအုပ်ပါ
ဒီစာအုပ်ကို U Maung Naing ကရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်
Seriver သမားများအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းပါ
Click Here to Download Backlight E-book
Credti U Maung Naing
Labels: မြန်မာလို Ebook များ
ဖုန်း ဘာတန်းတွေကိုကာလာစုံ အလွယ်ကူဆုံးပြောင်းပေးနိုင်မယ့် Color Status Bar_v0.7.7 APK
Android OS နှင့် Tablet ကိုင်ဆောင်ထားသော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အလွယ်ကူဆုံး ဖုန်း ဘာတန်းတွေကို ကာလာရောင်စုံ ပြောင်းပေးနိုင်မယ့် Color Status Bar_v0.7.7 APK လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖုန်းဘာတန်; အလှဆင်ကြတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုရန်အတွက် လည်းဖုန်းထဲ့မှာ Root မလို့ပါဘူး အလွယ်ကူဆုံး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကာလာရောင်စုံပြုလုပ်နိုင်ပြီ ပုံလေးထည့်ပြီး လန်းချင်ကြတဲ့ သူတွေကတော့ အောက်က လင့်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။AndroidOSVersion2.3နှင့်အထက်ရှိထားတဲ့ဖုန်းတွေပေါ်မှာInstallလုပ်၍လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
MTK device များ MTK droid tool အသုံးပြုရင်း ADB မသိရင် သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ???
mtk ဖုန်းတွေကိုကျနော်တို့ root ဖေါက်ပြီးတဲ့အခါfirmwarw backup ဆွဲထုတ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ်imei nulll နေလို့တခြာအကောင်းတစ်လုံးကနေbackup ယူထားတဲ imei ဖိုင်လေး restoreပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ်mtkdroid toolမှာ root ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီး ADB မသိတဲ့ Error တက်နေသူများအတွက် Ko Kyawmyint Htoo ဆီကရထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တာလေးကိုအရင်ရယူလိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
ဒေါင်းလို့ရလာရင်zip ဖြည်လိုက်ပါ။ apk သုံးခု ထည့်ပေးထားပါတယ်။
busy box နဲ့ busy box checker က လိုရမယ်ရ ထည့်ပေးလိုက်တာပါမလို တာများပါတယ်။
လုပ်နည်းလေး ပြောပြပါ့မယ်mtkdroid tool အဲလို erroပြနေပြီဆို ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာချိတ် ထားတာလဲပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဒေါင်းထားတဲ့ ထဲ့က adbd lnsecure.apkဆို တာလေးကို ဖုန်းမှာ install လုပ်ပြီး apk ထဲဝင်ကာ Enable insecure adbd ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ ( root တော့လိုအပ်ပါတယ်။ ) ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာ ပြန်ချိတ်mtkdroid tool လေး ပြန်ဖွင့်ရင်erro ကင်းကင်း နဲ့ ပြန်ချိတ်နေတာမြင်ရပါမယ်။အဲဒါမှ မရ ရင် busy box ကိုinstall လုပ်ပြီး busy box ရှိ မရှိ busy box checker နဲ့ ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ busy box ရှိနေပြီဆို ok ပါပြီ။ ကျနော့်အတွေ့ အကြုံ အရတော့adbd lnsecure apk လေး installလုပ်ပေးပြီးတာနဲ့ အစဉ်ပြေပါတယ်။ ဒါကြောင့် busy box က လိုရမယ်ရ လို့ပြောတာပါ။
Credit >>> Ko Kyawmyint Htoo
Author: Ko Htoo November 27, 2015
အနန္တော အနန္တ ငါးပါးအားဦးထိပ်ထားပြီး ရေးသားပူဇော်ထားတဲ့ apk လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိူးများအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ apk ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ apk လေးကို Myanmar Innovative မှ ရေးသားပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Download ရယူလိုပါက
Google Play မရှိသူများအတွက် other link
Author: Ko Htoo November 28, 2015
Posted by lin linn at 3:21 AM
Huawei Mate S ဖုန်း Android 5.1 Lollipop ကို Root ...
နည်းပညာကို လက်ဝါးပေါ်မှာ ကိုယ်လိုသလို အသုံးပြုနိုင်...
ဖုန်းကို လျှိ့ဝှက်ကင်မရာ (CCTV) လေးနဲ့ချိတ်ပြီးတို...
Pink Messenger Apk (Messenger2ခုအသုံးပြုချင်သူမျ...
Backlight.pdf စက်နိုးနေသော်လည်း ရုပ်မပေါ်ဖြေရှင်းနည...
MTK device များ MTK droid tool အသုံးပြုရင်း ADB မသ...
Email တစ်ခုကို Recovery လုပ်နည်း နှင့်2Step ကျော...
ဖုန်းအားအမြန်ဝင်စေမယ့် - GO Battery Saver &Power W...
ဓာတ်ပုံများကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ကာ သီချင်းများထည့်ပြ...
Asus Zenfone2Laser ZE550KG/Z00RD ဖုန်းများကို Ro...
Root ဖောက်ထားပြီးသား ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် mtk droid t...
စီးကရက် လိုလည်း သောက်လို့ရမယ့် စမတ်ဖုန်း Vaporcade...
YouTube က သီချင်း/movie တွေအလွယ်ဒေါင်းနိုင်တဲ့ - S...
Samsung Galaxy Note4SM-N910H Android 5.1.1 Lolli...
Andorid ကမ္ဘာတွင် သင်ဝယ်ယူအသုံးပြုသင့်သည့် အကောင်းဆ...
Samsung Galaxy Note3SM-N900T Android 5.0 Root လု...
ဖုန်း Alarm system လေး - globio v2.0.2 Apk
ဖုန်းမှာ call မ၀င်စေခြင်တဲ့ဖုန်းတွေကို Block ပေးနိ...
ဖုန်းမှာ movie4ကားတပြိုင်ထဲ ကြည့်နိုင်တဲ့ - X4 V...
Android Smartphone ကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ KingRo...
OnePlus X Smartphone ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Root...
ဖုန်းမှာ Kinguser Application ကို Remove ပြုလုပ်နည...
Hacker များသည် IOS9ကို ဟက်နိုင်သွားပြီး ဆုကြေးငေ...
သင့်ရဲ့ Samsung Galaxy Phone ကိုဟက်ကာတွေက ဘယ်လိုကြ...
ဖုန်းမှာ အသံဖမ်း Apk ကောင်းလေး - Easy Voice Record...
တစ်စက္ကန့်ကို ရုပ်ရှင် ၁၈ ကား ဒေါင်းနိုင်မယ့် Wi-Fi...
ဖုန်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းနည်းတွေကြည့်နိုင်မယ့် - Abs Wo...
လမ်းသွားရင်း ထောက်ချောက်တွေထဲ ရောက်မသွားစေဖို့ GPS...
Android ဖုန်းတွေရဲ့ IMEI ကို Backup & Restore ပြုလ...
မိမိဖုန်းထဲမှာUSB OTG ရမရစစ်ဆေးတဲ့Appလေးပါ။
စမတ်ဖုန်းဆိုင်ရာ Bootloader, Recovery & Root များအ...
♪ တယ်လီနောရဲ့ တန်ဆောင်မုန်း promotion လာပါပြီ။ ♫
မိမိ ဖုန်းရဲ့ App တွေကို backup မှတ်ပေးထားပြီး သိမ...
COC Player များအတွက် Auto attack / Auto troop trai...
♪ Android ဖုန်းများတွင် WiFi Connection ကို အကောင်...
♪ “iPad Pro မှာ တင်ထားသင့်သော မရှိမဖြစ် Apps များ”...
♪ မိမိရဲ့အသံကို စက်ရုပ်အသံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင...
MMAio Font Changer Pro Apk
Facebook & Viber တို့ပေါ် Mp3 တင်နည်း
Online ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Video , Music စတာတွေကို Dow...
ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့...
မိမိ စမတ်ဖုန်းတွေကို အခြားသူတွေမမြင်တွေ့စေချင်တဲ့ ...
ဖုန်း Screen မှာ Window နှစ်ခုနဲ့ လန်းနိုင်မယ့် - ...
LG V10 ဖုန်းကို Bootloader Unlock ပြုလုပ်နည်း
Samsung Galaxy E7 ဖုန်းကို Android 5.1.1 Lollipop ...
Samsung Galaxy J7 ဖုန်းကို TWRP recovery ထည့်သွင်း...
Samsung Galaxy J7 Android 5.1.1 Lollipop Root လုပ်...
iOS Device များ Firmware တင်ရင်းဖြစ်တဲ့ iTune Erro...
ဖုန်းထဲ့မှာ ပြုလုပ်တာတွေကို ဗီဒီယို ရိုက်ပေးနိုင်မ...
ဓာတ်ပုံတွေ့ မှာ စကားပြောပြီး သူငယ်ချင်းတွေဆီ စနောက...
♪ momolay application က စာရေးသူနှင့် ထုတ်ဝေသူများက...
♪ သတင်းအချက်အလက်များကို သတိပေးမည့် Notify app ကို ...
ဖုန်း video recoder အလန်းစားလေး - Secret Video Rec...
♪ အင်္ဂလိပ်စာ Advance Grammar ကိုဖုန်းထဲမှာလေ့ကျင့်န...
မိုဘိုင်း Google Search တွင် Facebook မှ အချက်အလက်...
♪ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အချက်အလက်များကိုတိကျစွာဖော်ပြပေး...
Android Mobile ကိုင်သူများအတွက်ပါ ( Android User G...
WiFi ဟတ်နည်း WiFi ဟက်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်း (ပုံနှင့်တ...
မိမိဆီဖုန်းဝင်လာရင် ” ဖုန်းမအားသေးပါလို့ဖြေဆိုပေးမ...
အဆင့်မြင့် ခေါက်ဖုန်းအဖြစ် ပြန်လည်သစ်ဆန်းတော့မယ့် ...
နောက်ထွက် အိုင်ဖုန်းတွေမှာ နားကြပ်ပေါက်နဲ့ စပီကာပေ...
ဖုန်းထဲက Message တွေသူများမမြင်အောင် ဖွက်ထားပေးမယ်...
နောက်ဆုံးထွက် Movie တွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်မည်...
IOS တွင် လွယ်ကူစွာ Frimware ပြန်တင်နည်း…..( ကွန်ပျ...